စာရေးဆရာမကြီးဂျူး၏ “ကိုယ့်ဘ၀ခဏ ဘယ်သူယူပါ့မယ်´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » စာရေးဆရာမကြီးဂျူး၏ “ကိုယ့်ဘ၀ခဏ ဘယ်သူယူပါ့မယ်´´
စာရေးဆရာမကြီးဂျူး၏ “ကိုယ့်ဘ၀ခဏ ဘယ်သူယူပါ့မယ်´´
Posted by ခင်ခ on Dec 1, 2012 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness | 13 comments
အောက်တိုဘာလထုတ် ‘ကျန်းမာရေး’ မဂ္ဂဇင်း တွင် ပါရှိသော စာရေးဆရာမကြီး ဂျူး၏ စာမူကို အပြည့်အစုံဖတ်ရှုလိုသော စာဖတ်ပရိသတ်အတွက် ‘ကိုယ့်ဘ၀ခဏဘယ်သူယူပါ့မယ်။’ ဆောင်းပါးကို အပြည့်အစုံ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
တကယ်တော့ ထိုဘဲဥအကွဲသည် ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လောက်ထိ အန္တရာယ်ဖြစ်စေမလဲ။ မေမေလည်း မသိခဲ့။ ကျွန်မတို့လည်း မသိခဲ့ပေ။ အရွယ်နည်းနည်းရောက်လာလို့ စာဖတ်တာတွေများလာလို့ နောက်ပြီးဆေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ လေးဖြစ်လာတော့မှ ဘဲဥအခွံတွင် ကပ်နေလေ့ရှိသော ရောဂါပိုးများအကြောင်း သိလာသည်။ ဘဲဥ၊ ကြက်ဥကို မခွဲခင် ရေစင်စင် ဆေးပစ်ရမည်။ ဒါမှသာ အခွံမှာရှိနေသော အညစ်အကြေးတွေက ခွဲလိုက်သည့် အအက်ထဲမှတစ်ဆင့် အတွင်းက အကာအနှစ် တွေထဲသို့ စိမ့်ဝင်ခြင်းမရှိမှာ။ အမယ် …ဒါတောင် ဆယ်လ်မိုနဲလား ခေါ်သည့် ရောဂါပိုးဆိုလျှင် ဘဲဥ၊ ကြက်ဥအခွံကို ဖောက်ထွင်း ပြီး အတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်နိုင်သည်တဲ့။ ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ။ ဒီလိုဆိုတော့ ငယ်ငယ်က ကျွန်မတို့ စားခဲ့ရသည့် အလတ်ကွဲ ဆိုလျှင် အကွဲကြီးအချိုင့်ကြီးကနေတစ်ဆင့် အပြင်ကအညစ်အကြေးတွေ ၀င်နေပြီးသားတောင် ဖြစ်မည်။ နောက်ပြီး ဘဲဥက အကွဲမို့ ရေစင်စင်ဆေးပစ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့။ ဒီအတိုင်းပဲ အ၀တ်လေးနှင့်သုတ်ပြီး ခွဲကာ ကြော်လိုက်ကြရသည်။
ကျွန်မတို့ အနီးအနားတွင် ရောဂါဖြစ်စေသည့် အစားအစာတွေ များစွာရှိနေသည်။ မသိနားမလည်လျှင် ထိုအန္တရာယ် ထဲသို့ ၀င်မိမည်။ ဈေးကိုသွားသည့်အခါ ဈေးကနေ၀ယ်ယူကြမည့် ပစ္စည်းတွေမှာ အန္တရာယ်တွေရှိနေသည်။ ငရုတ်သီးခြောက်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ မြေပဲဆံတို့တွင် မှိုအနည်းငယ်ရှိနေလျှင် အယ်ဖလာတောက်ဆင်ခေါ် အဆိပ်တစ်မျိုး ဖြစ်နေတတ်သည်။ ထို အဆိပ်သည် လူ့ကိုယ်ထဲရောက်လျှင် ကင်ဆာဖြစ်စေတတ်သည်။ စားသုံးဆီအနေနှင့် စားအုန်းဆီက နှလုံးရောဂါနှင့် သွေးတိုး ရောဂါတို့ ဖြစ်စေပြီး နှမ်းဆီနှင့် ပဲဆီက ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည် ဆိုစေကာမူ ထိုပဲဆီကို မှိုပါသည့်မြေပဲဖြင့် ကြိတ် ထားသည်ဆိုလျှင် အယ်ဖလာတောက်ဆင်တွေပါပြီး ထိုဆီကို စားသူအား အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အမေရိကန်တွေက ပေါင်မုန့်နှင့်စားရန် မြေပဲထောပတ်ကို သုံးကြသည်။ ထိုမြေပဲထောပတ်မှ အယ်ဖလာတောက်ဆင်ပါဝင်ပြီး ကင်ဆာဖြစ်စေသည့် ရာခိုင်နှုန်းမှာ တော်တော်နည်းသော်လည်း ဖြစ်နိုင်ခြေတော့ရှိနေသည်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံသည် နှလုံးရောဂါအဖြစ်များဆုံး အာရှ ပစိဖစ်ဒေသနိုင်ငံတွေထဲတွင် ထိပ်နားလေးက ပါဝင်သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ကောက်ယူထားသော စစ်တမ်းအရ မြန်မာနိုင်ငံသည် နှလုံးရောဂါဖြင့် သေဆုံးသည့်နှုန်းက လူတစ်သိန်းတွင် (၄၁၉)ရှိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံက (၁၆၄)ဟု ဆိုပါသည်။ မွန်ဂိုးလီးယားက ထိပ်ဆုံးကဖြစ်သည်။ (၄၇၅)ဟု ဆိုပါသည်။ ကျွန်မကတော့ နှလုံးရောဂါဆိုလျှင် အဓိကတရားခံက စားအုန်းဆီဟုပင် တွေးလိုက် မိသည်။ ထောပတ်တို့၊ ချိစ်တို့သည် မြန်မာမိသားစုအများစု မစားနိုင်ကြဘူး မဟုတ်လား။ အလွန်ဆုံးစားနိုင်လျှင် ၀က်ဆီဖတ်၊ အမဲအူ၊ ဆိတ်အူ လမ်းဘေးကြော်သည့် အကြော်အလှော်တွေ။ ထိုအကြော်တွေကတော့ စားအုန်းဆီကို ပေါပေါများများသုံးသည့် အပြင် နှစ်ခါပြန် သုံးခါပြန် အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ကြော်ထားသည့် ဆီတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ ထိုဆီများသည် ပိုလီ ပြည့်ဝဆီ အထပ်ထပ်ဖြစ်နေသည့်ဆီတွေ မဟုတ်ဘူးလား။ ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးကလည်း ဆီဖြင့်ကြော်တာကို တော်တော်ကို နှစ်သက် ကြသည်။ တို့ဟူးကြော်ကို နှစ်ပြန်ကြော်တဲ့။ တစ်ခါနှင့် အားမရလို့ ပိုကြွပ်ရွအောင်ဖြစ်မှာပေါ့။ လက်ဖက်နှင့်စားသည့် ပဲကြော်၊ အကြော်စုံကိုလည်း နှစ်ပြန်ကြော်တဲ့။ အေးပေါ့ နှစ်ပြန်ကြော်ဆိုတော့ နှစ်ဆပိုတာပေါ့။ ပိုလီ မပြည့်ဝဆီဖြစ်တာပေါ့။
နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး Citizen’s right ဆိုတာကိုတောင် ဘာမှန်းမသိသေးသည့် ကျွန်မတို့အတွက် စားသုံးသူ အခွင့် အရေးဆိုတာက နည်းနည်းတော့ အလှမ်းဝေးနေသလိုရှိပါသည်။ ကျွန်မတို့လို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော် များများက နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး မရကြသူတွေ။ လျှပ်စစ်မီးဆိုတာကို အသာထားလိုက်ပါဦး။ သန့်ရှင်းသည့် သောက်သုံးရေကို မရတာ၊ အန္တရာယ်ကင်းသည့် ကျန်းမာရေးနှင့် ပြည့်စုံသည့် အိမ်တစ်ခုကို မပိုင်ဆိုင်နိုင်တာ ဒါတွေက နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေခြင်းဟု ယေဘုယျ ပြောနိုင်ပါသည်။ အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ရွာသားငါးယောက်မှာ တစ်ယောက်သာ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်း (Sanitation)သည့် လူနေမှုဘ၀ကို ရသည်ဟုဆိုသည်။ အဲဒါက အရေးကြီးလားဆိုတော့ အရေးကြီးတာပေါ့။ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းသည့် လူနေမှုအဆင့်ကို မရလျှင် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မည်။ ပထမဆုံးခံရတာတော့ ငါးနှစ်အောက် ကလေးလေးတွေပဲ ပေါ့။ ငါးနှစ်အောက်ကလေးတွေ ကမ္ဘာကြီးမှာ တစ်ရက်ကို ငါးထောင် သေနေကြသည်။ ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေး တစ်ထောင်မွေးလျှင် တစ်ရာ့လေးယောက်က ငါးနှစ်မပြည့်မီ သေကြရသည်။ အကြောင်းရင်း အမျိုးမျိုးရှိသည်။ အာဟာရ ချို့တဲ့ လို့၊ ရောဂါဖြစ်လို့။ ငါးနှစ်အောက်ကလေးတွေ သေကြရသည့်အကြောင်းရင်းထဲမှာ နံပါတ်တစ် အကြောင်းကတော့ နျူမိုးနီးယား ဟုခေါ်သည့် အဆုတ်ရောင်ဖျားနာခြင်း၊ နံပါတ်နှစ်ကတော့ ၀မ်းလျှော ၀မ်းပျက်ခြင်းတဲ့။
၂၀၀၈ ခုနှစ်က ငါးနှစ်အောက်ကလေးတွေ သေနှုန်းကို အာရှပစိဖစ်ဒေသအတွက် စစ်တမ်းကောက်ထားတာရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံက အများဆုံးသေ၏။ ဒါတောင် အရင် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွေတုန်းက ကျွန်မ သိထားသည့် ၁၀၆ ယောက် ဆိုတာထက် နည်းသွားလို့ တော်သေးသည်။ ၉၅ယောက်ဟု ဆိုပါသည်။ ကျွန်မတို့က ကလေးသေနှုန်းတွင် ထိပ်ဆုံးကဖြစ်သည်။ ကလေးတွေ ပဲလား မဟုတ်သေးပါ။ ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူကြီးတွေ၏ သေနှုန်းကလည်း တခြားသောနိုင်ငံတွေထက် ပိုမြင့်ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်အတွင်း သေနှုန်းအစီရင်ခံစာတွင်လည်း ကျွန်မတို့နိုင်ငံက သေနှုန်းအမြင့်ဆုံးပါပဲ။ ကျွန်မတို့၏နောက်မှာ လာအိုနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ထိုသေနှုန်းသည် လူ (၁၀၀၀)တွင် တွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နောက်တော့ ကျွန်မ သက်သာလိုသက်သာငြား အကျိုးအကြောင်း ရှာဖွေကြည့်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဆိုတော့ ကျွန်မတို့ဆီမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်း ကြောင့် လူတွေ တစ်သိန်းသုံးသောင်းကျော် သေကြေပျောက်ဆုံးကြရတာမို့ ကိန်းဂဏန်းတွေက အဲဒီလောက်မြင့်တက်နေတာ လား။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် တစ်နှစ်လုံးအတွက် တွက်ထားပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ကြေညာတာမို့ များနေတာလား။ ဒါမှမဟုတ် …အင်းလေ ဒါက ပညာရှင်တွေနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ပုဂ်္ဂိုလ်တွေသာ သိမှာပေါ့။ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ တစ်နှစ်အောက်ကလေး (နို့စို့ကလေးဟု ခေါ်မလား။ ဆေးပညာအခေါ်တော့ infant mortality rate ဟုပဲခေါ်သည်။) သေနှုန်းကလည်း မြန်မာက ဒုတိယ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်နေပြန်သည်။ တော်သေးတာပေါ့လေ။ ကိုယ့်အထက်မှာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ခံနေပေလို့။ ဒါတောင် တစ်ယောက်ပဲ လျော့တာ။ ပါကစ္စတန်က နို့စို့တစ်နှစ်အောက်ကလေး ၁၀၀၀ တွင် ၇၂ ယောက် သေသည့်အချိန်တွင် ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံက ၇၁ ယောက် သေတာဆိုပဲ။
အမြီးကိုများ စားလိုက်သလားဟယ်ဟု ကျွန်မ ပခုံးတွန့်လျက် မေးမိသည်။ ကျွန်မ ကြားဖူးသလားလို့ မြွေအမြီးကို ဘာလုပ်ရတယ်ဆိုလား။ မသေချာ။ မစားဘူး။ အဲဒီအမြီးပြတ်နဲ့ မြွေကိုက်တဲ့ အနာကို တို့တာတဲ့။ အဲဒီအမြီး ပါမလာဘူး။ ချုံထဲ လွှင့်ပစ်ခဲ့ဟန် တူပါသည်။ အရေးကြီးဆုံးကို မေးမိသည်။ မြွေဆိပ်ဖြေဆေး ရှိရဲ့လားဟယ်။ ရှိတယ်။ တော်သေးတယ်။ သူ ကံကောင်းတာ။ နောက်ဆုံးလက်ကျန် ဖြေဆေးပဲ။ အို …။ ကျွန်မ တော်တော် လန့်သွားပါ သည်။ ပြည်နယ်ဆေးရုံကြီးမှာတောင် မြွေဆိပ်ဖြေဆေးက ဒါနောက်ဆုံးပဲဆိုတော့။ မကြာခင်တော့ ဆေးတွေပြန်ရောက်လာဦးမှာပါ။ သို့သော် ဆေးမရောက်မီ တစ်ယောက်ယောက်များ ထပ်ကိုက်ခံလိုက်လို့ကတော့ …။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာတွင် မြွေကိုက်ခံရသူ အများဆုံးနိုင်ငံများ စာရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ အသေအပျောက် အများဆုံးကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံပေါ့။ နှစ်စဉ် လူ (၅)သောင်းလောက် မြွေကိုက်ခံရလို့ သေဆုံးနေကြသည်။ သူငယ်ချင်းလာသည်က အစည်းအဝေးလာတက်ရင်းနှင့် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီအတွက် ဗိုင်းရပ်စ်မပွားအောင် တားဆီးသည့် အေအာရ်တီခေါ် ဆေးရလျှင် ပြည်နယ်အတွက်ယူရန် ဖြစ်သည်။ ငှက်ဖျားရော ဆေးလုံလောက်လား။ လုံလောက် တယ်။ တော်သေးတာပေါ့။ ငှက်ဖျားတွေကဟယ် လာလိုက်ရင် ဦးနှောက်ငှက်ဖျားတွေချည်းပဲ။ ချင်းပြည်နယ်မှာ ငှက်ဖျားခြင် ရှိ တယ်ပေါ့။ ပေ ၆၀၀၀၊ ၇၀၀၀ တောင်ပေါ်မှာရှိနေကြသော်လည်း ငှက်ဖျားခြင်ကတော့ သူတို့နားတွင် ၀ဲနေပုံရပါသည်။ တောထဲ သွားကြမည်။ စိမ့်စမ်းရေအိုင်ရှိသည့်နေရာတွင် ခြင်တွေရှိမည်။ ခြင်ကိုက်မည်။
တစ်နှစ်လျှင် လူပေါင်း (၃)သိန်းခွဲလောက် ငှက်ဖျားရောဂါ ဖြစ်သည်။ အစီရင်ခံစာအရ လူ (၁၀၀၀)လောက်က နှစ်စဉ် သေသည်။ သစ်တောနှင့် နီးစပ်သည့်နေရာတို့တွင် ငှက်ဖျားဖြစ်တတ်သည်။ မြို့တိုင်း၊ ရွာတိုင်းမှာ ငှက်ဖျားခြင်တွေ ရှိနေပြီ။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ပိုပြီးပူနွေးလာခြင်းကြောင့် နဂိုကခြင်မရောက်သည့် တောင်ပေါ်ဒေသတို့တွင် ခြင်တွေ ရောက် ကုန်ပြီ။ ထိုခြင်တို့ကို ကာကွယ်တားဆီးမှုမရှိ။ ခြင်အောင်းသည့်နေရာတို့ကို ဖျက်ဆီးခြင်းမရှိ။ ထို့ကြောင့် မြို့ပေါ်ရော တောနယ်ပါ ငှက်ဖျားရောဂါနှင့် အလွန်နီးစပ်နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ (၃၄)သန်းကျော်သည် ငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ဖို့ အန္တရာယ် တွေနှင့် ကြုံနေရသည်ဟုဆိုသည်။ ဒါဖြင့် ကျွန်မလည်း ပါတာပေါ့။ ရန်ကုန်မှာနေသော်လည်း ငှက်ဖျားခြင်က နေရာအနှံ့မှာ ရှိနေ တာကိုး။ ကြောက်စရာကြီးပါလား။ ဒါကြောင့်ငှက်ဖျားရောဂါသည် ကျွန်မတို့နိုင်ငံ၏ အသေအပျောက်အများဆုံး ရောဂါစာရင်းမှာ ထိပ်ဆုံးက မဆင်းတာကိုး။ ငှက်ဖျားဖြစ်ပွားသော အာရှပစိဖစ်ဒေသနိုင်ငံများတွင် ဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးက အိန္ဒိယဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယက လူဦးရေလည်း မတန်တဆများတာကိုး။ ဖြစ်ပွားသည့်လူနာပေါင်း တစ်သန်းခွဲခန့် (၁၅၃၂၄၆၇)ရှိသတဲ့။ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာတော့ လေးသိန်းခန့် (၄၁၁၄၉၄)ရှိသတဲ့။ သူတို့နိုင်ငံက လူများလို့ လေးဆခန့် ပိုများတာပေါ့။ သို့သော် အံ့သြစရာက သေဆုံးသည့် အရေအတွက်ကျတော့ ကျွန်မတို့က ပိုများခြင်းဖြစ်သည်။ လူတစ်သန်းမှာ သူတို့က ၁၀၆၀ပဲ သေပြီး ကျွန်မတို့က လူလေးသိန်းမှာ ၁၀၈၀ သေနေရသည်။ ဒါကိုကြည့်လျှင် ကျွန်မတို့၏ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေခံ အဆောက်အအုံတွေ ဘယ်လောက်နိမ့်ကျနေသည်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားပါသည်။
တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်မ ငယ်စဉ်က သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို သတိရမိသည်။ သီချင်းခေါင်းစဉ်ကိုတော့ အတိအကျ မမှတ်မိပါ။ သည်နွေသည်မိုးသည်ဆောင်း ထင်ပါရဲ့။ ကိုယ့်ဘ၀ ခဏဘယ်သူ ယူပါ့မယ်တဲ့။ ကျွန်မတို့ ပြည်သူလူထုတွေ၏ ဘ၀ကို ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်ယူပြီး မျှဝေခံစားကြည့်ကြလျှင် သိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်မတို့သည် အန္တရာယ်တောထဲမှာ ရဲရင့်စွာ သို့မဟုတ် ရဲရင့်အောင် မနည်းအားတင်းပြီး နေထိုင်နေကြသူများဆိုတာ …။
ရှေ့ဆက်ပြီး အန္တရာယ်တွေနည်းပါးတော့မည်ဟု မျှော်လင့်ရပါသည်။ တလောကတော့မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေခံ ကျန်းမာ ရေးစောင့်ရှောက်မှုကို မြှင့်တင်ဖို့ ဒုတိယသမ္မတ မိန့်ခွန်းပြောတာလား။ သတင်းစာထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရသည်။ ၂၀၁၃၏ ကျန်းမာရေး အစီရင်ခံစာတွင်တော့ သေနှုန်းတွေ လျော့ကျလာကောင်းပါရဲ့။
ခင်ခ ဖတ်ကြည့်ပြီး ကောင်းတဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးလေးမို့ ဖတ်လိုသူများအတွက် ဝေမျှပေးတာပါ။
ဟုတ်ပါတယ်လေးခရေ ဆီစစ်စစ်ကတော့ ကိုယ့်အိမ်မှာဘဲ ကြိတ်ပြီးသုံးမှဘဲ အပြင်ဆိုင်တွေတော့ မရှိလောက်တော့ဘူး ထင်တာပါဘဲ
ဖတ်ရတာ အတော်ကြာဖတ်ခဲ့ရပါသည် ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သတ်သည့် ဗဟုသုတ အပြင်
လူနေမှုဘ၀ ဗဟုသုတတွေပါ တော်တော်များများ ပါဝင်ထိမိတဲ့အတွက် အကျိုးရှိတဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်
ကိုယ်ဘ၀ ခဏတာဟာ သူတစ်ပါး ယူချင်စရာ ကောင်းလောက်တဲ့ အနေအထားမဟုတ်တဲ့အတွက်
ဘယ်သူမှ ယူပေးချင်မှာမဟုတ်ပေမယ့် ဘ၀ကို စိတ်အားငယ်မှုတွေ ခဏဖယ်ထားပြီး
အကောင်းဆုံး အနေအထားကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ ကြိုးစားခြင်းကသာ လက်တွေ့ဘ၀ အတွက်
အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟု စဉ်းစာမိပါ၏။
ခုခေတ် ကျမအပါအ၀င် လူတိုင်းနီးပါး( သာမာန်ဘွဲ့ရ ဆိုကြပါစို့) ကျန်းမာရေးအသိ ပတ်ဝန်းကျင်အသိ ကျောင်းပြီးသွားပေမဲ့ ပါမလာခဲ့ပါဘူး။ စာဖတ်ကြသူတွေ လေ့လာကြတဲ့သူတွေသာ သိနေတတ်ကြပါတယ်။
ဆိုတော့ ဒီနေရာမှာ စနစ်ကို အပြစ်တင်ချင်ပါတယ်။ ပညာရေးစနစ်သာကောင်းခဲ့ရင် ကျောင်းပြီးတာနဲ့ သိသင့်သိထိုက်တာတွေ ပညာပေးကစလို့ အကြောင်းအရာပေါင်းစုံကို သိခွင့်ကြုံခဲ့ရင် ကိုယ်ကတဆင့် မသိသေးတဲ့ ကိုယ့်မိသားစု
ကိုတောင် ပြန်ပြီး လမ်းညွှန်အသိပေးခွင့်လေးတော့ ရှိကောင်းရှိနိုင်ခဲ့မှာပါ။ အလေ့ကျင့်ကောင်းတွေကိုလည်း ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
ခုခေတ်ကတော့ ဘာကိုပဲ ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက် ဘာတွေပဲ ဖြစ်လိုက် ဖြစ်လိုက် မသိခြင်းအကြောင်းတရားတွေကြောင့် သာ ပြသာနာတွေ မကြီးသင့်ပဲ ကြီး မဖြစ်သင့်ပဲ ဖြစ် မသေသင့်ပဲ သေ နေတာတွေပါ။ မရှိတာထက် မသိတာခက်နေတာ။
စနစ်ကြောင့် ဥာဏ်မွဲရတယ် ဥာဏ်မွဲလွန်းတော့ လူတွေပျက်စီးရတယ် ဆင်းရဲရတယ် ။
စနစ်ရယ် လူရယ် ဘတပြန် ကျားတပြန် သူတင် ကိုယ်တင် ။
ဒီပုံတိုင်းဆို ကျမလည်း သက်ဆိုးရှည်မယ်မထင်ဘူး။
ကျန်းမာရေးအသိတိုးစေတာမို့ ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ ကိုခင်ခကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအသိပညာ အားနည်းတာတော့ ကိုယ်တိုင်လည်း ထိပ်ဆုံးကပဲ။
တချို့တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စတဲ့ အသိပညာပေးတာတွေကို ကျောင်းနေရွယ်ကလေးတွေကနေမှတဆင့် လူကြီးတွေကို ပြန်သင်ကြားတဲ့ နည်းစနစ်ကို သုံးကြတာ တွေ့ဖူးတယ်။
ကျောင်းကနေ ကလေးတွေကို သင်ပေးပြီး အိမ်မှာ အိမ်သူားတွေကို ပြန်ဖြန့်ဝေခိုင်းတာမျိုး၊
ကျောင်းကို မိဘတွေကိုခေါ်ပြီး ကလေးတွေနဲ့ အတူ သင်ကြားပေးတာလိုမျိုး နည်းတွေကို သုံးကြတယ်။
ကလေးတွေကတဆင့် လူကြီးတွေကို ပြန်သင်ကြားဖြန့်ဝေဖို့ အဲဒီကိစ္စကို ဒေါ်စုလည်း ပြောဖူးသလားလို့။
မမ ပြောတဲ့နည်းစနစ်တွေကို တစ်ချို့တိုင်းပြည်တွေမှာ ကျင့်သုံးနေကြတာ ဖတ်ဖူးတယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ပညာရေး ကျန်းမာရေး စနစ်က လက်တည့်စမ်းတဲ့အဆင့်ကနေကို တိုးတက်မလားဘူးဗျ။ မမ ပြောတဲ့စနစ်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်အတွက် အကောင်းဆုံးမို့ BC ပေးလိုက်တာပါ ကွန်မန့်လေးအတွက်ကျေးဇူးပါနော်။
မိုင်ယာမီ ကမ်းခြေက မြေလည်း. တပေပတ်လည် တကျပ်ခွဲပဲ
သာဂီ့တို့ဆီက ဓနိတော့လည်း တပေပတ်လည် တကျပ်ခွဲပဲ.
ကြေးနီကြေးနီရပ်ရပ်. ထားဝယ် ထားဝယ် ဖျက်ဖျက်.
ကောင်းဗျာ…လေးခင်ခ တင်ပေးလို့ ဖတ်ရတယ်
သေရမှာ ကြောက်လားလို့ မေးရင် ကြောက်တယ်လို့ ဖြေမယ်ဗျို့ 
ပိုးသတ်ဆေးကောင်းကြောင်း နေ့စဉ်တီဗွီက ကြော်ငြာလာနေတာ များများ
ကြက်မကြီးလိုက်စားပါမှ ကြက်မကြီးကိုတန်ဖိုးထား ကြက်မကြီးအကြောင်း ပိုသိလာဂျမပေါ့။ အဲဒီကြက်မကြီးဆိုတာလည်း သိပ်မြင့်မြင့်မားမား မဖြစ်လည်းရနိုင်ပါတယ်၊ ဥပမာ – မနက်လမ်းလျောက်၊ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းတာမျိုး။ ကြက်မကြီးကျေးဇူးနဲ့ နေထိုင်သွက်လက် ပေါ့ပါးလာမှ အယင်ကနဲ့ မတူတာ သတိထားမိပြီး အခြားကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများကို ဂရုစိုက်လာမယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားလာမယ်။ အနေအထိုင် ဆင်ခြင်တတ်လာမယ်။ အရေးကြီးတာ ပေါချောင်ကောင်း လူတိုင်းအလွယ် လုပ်နိုင်တဲ့ ကြက်မကြီးအလေ့အကျင့်များ ထွန်းကားလာဖို့ ဘယ်လိုအားပေးကြမလဲ၊ နေရာထိုင်ခင်း စီစဉ်ပေးကြမလဲဆိုတာ… အင်း ကြက်မကြီး ကြက်မကြီး ကတော် ကတော်…..
ဟိုတုန်းကတော့ ဆရာမ ဂျူး ရဲ့စာအုပ် အတော်များများဖတ်ခဲ့ဖူးသလို အရမ်းလည်းကြိုက်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ ..
အခုတော့ အလှမ်းဝေးနေတာ အတော်ကြာပေါ့..
ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးများလှတဲ့ ဒီပိုစ့်လေးလည်းကြိုက်ပါတယ်..
တင်ပေးသူ ကိုခင်ခ ကိုလည်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်….
ဂျူး ရဲ့ ” မိန်းမတစ်ယေက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝန်ခံချက် ” နဲ့” ကံကြမ္မာကိုမယုံကြည်ကြသူများ ” ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေဆို ဝယ်ပြီးတော့ သိမ်းထားမိတဲ့အထိ ပေါ့….
ကျုပ်တို့မှာ မသိတာထက် မလိုက်နာတာကပိုနေတာထင်တာပဲ..
အဲဒါတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ ကိုကြီးမိုက်ရေ။
ကျွန်တော်က ကျန်းမာရေးအသိတိုးဖို့ ဆေးလိပ်သောက်တာမကောင်းတဲ့အကြောင်း ရေးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်၊ ကိုယ်တိုင်က လဘက်ရည်သောက်ရင် စီးကရက်လေးဖွာဖြစ်တယ်လေ။ ဖြတ်သင့်တာသိပေမယ့်
လျော့လို့ဘဲ ရပြီး မဖြတ်နိုင်သေးဘူးဗျ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရေးဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေးအသိစာပေကို ဖတ်ဖြစ်သူတစ်ဦးဦးက လိုက်နာလုပ်နိုင်ရင် ထိုသူအတွက် ကောင်းစေတာဘဲဆိုပြီး ရေးနေဖြစ်ပြန်ရောဗျို့။